Xildhibaan ku eedeeyay Xisbiga Himilo Qaran inay colaad ka hurinayaan Galmudug | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Xildhibaan ku eedeeyay Xisbiga Himilo Qaran inay colaad ka hurinayaan Galmudug
Xildhibaan ku eedeeyay Xisbiga Himilo Qaran inay colaad ka hurinayaan Galmudug
Xildhibaan C/xakiin Macalin Axmed oo ka mid ah Golaha Shacabka Somaliya, sidoo kalena ka tirsanaay Xisbiga Himilo Qaran, balse laga saaray xisbigaasi ayaa eedeyn ujeediyay xubnaha Xisbiga.
Waxa uu sheegay xubno ka tirsan Xisbiga Himilo Qaran inay isku aragti ka noqon waayeen, xaaladaha ka taagan deegaanada Galmudug.
Xildhibaan C/xakiin Macalin Fiqi ayaa sheegay in xisbiga Himilo Qaran colaad ay ka hurinayaan deegaanada Maamulka Galmudug oo la filaayo dhawaan doorasho inay ka dhacdo.
“Xubnaha Xisbiga qaarkood waxaan aad ugu kala aragti duwanaanay isku day ay wadaan siyaasiyiinta qaarkood oo ah in colaado laga huriyo deegaanka aan anigu matalo ee Dhuusamareeb, iyo guud ahaan Galmudug, si fowdadaas looga dhex raadiyo dana siyaasadeed oo aan u arkayay in aysan deegaanka dani ugu jirin.” ayuu yiri Xildhibaanka.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka mideysan yihiin arrimaha ku saabsan dhismaha Dowlad Goboleedka Galmudug, hayeeshee Xubnaha Xisbiga qaar u cuntami weysay, waxaana uu mar kale beeniyey in Ciidan Itoobiyaan ah oo aan kamid aheyn Amisom la geeyey dhuusamareeb, isla markaana taasi aysan ogolaaneyn.
“Majiro ciidan itoobiyaan ah oo aan kan Amisom ahayn oo Dhuusamareeb jooga, laakiin waxaan rabaa in aan caddeeyo Marnaba in aanan raalli ka noqonaynin, in Ciidan Itoobiyaan ah iyo mid kale toona ay farageliyaan nidaamka doorashada ee Galmudug, sidoo kalana lama aqbali karo in buun buunis iyo been abuur lagu dhaawaco hannaanka dib u heshiisiin iyo doorasho ee galmudug.” ayuu sii raaciyey hadalkiisa Xildhibaanka.